संस्कार आफ्नै-आफ्नै, यो नर्वे त्यो नेपाल
मेरो खुशिः आफ्नो गर्भमा भएको बच्चाको तस्बीर देखाउँदै हन्ना
हन्ना अर्थात मेरो सम्पर्क ब्यक्ति । मैले कुन दिन के गर्नु पर्ने हो त्यो कामको योजनाकार ! वा, नेपालमा भएको भए मेरो हाकिम ! तर यहाँ चाँहि उनि मात्र सम्पर्क ब्यक्ति । हाकिमपारा खोजेर पनि भेट्न गार्हो । उनी कार्यालय छिर्दा म मेरो कुर्सीबाट उठेर विनित हुँदै अभिवादन गर्नु पर्दैन् । जसले पहिला देख्यो उसले अभिवादन गर्ने । काइदाको रीति भएको देशमा जन्मेकी एक नारी !
आज मुहारभरी नै खुशि बोकेर उनि कार्यालय छिरेकी थिइन । हातमा सानो कागज पनि बोकेकी थिइन, उनले । उनि सरासर मतिर आइन । र, आफूले ल्याएको कागज देखाउँदै भनिन् ‍‑ मेरो बच्चाको अवस्था सामान्य छ । म लाजले पानी पानी भएँ । यस्तै कुनै दिन थियो – जतिखेर मेरी श्रीमती पनि गर्भवती थिइन । र, हामी दुर्इजना लाजले पानी पानी भएका थियौं- कि जतिखेर हामीलाई थाहा लाग्यो - हामी बाबा आमा बन्नेवाला छौं । यस्तो बेलामा परिवारका अन्य सदस्यहरूसँगै बसेर हामी दुर्इजनाले गर्भमा भएको बच्चाको अवस्थाका बारेमा छलफल गर्नु पर्ने थियो । तर नढाँटेर भन्नुपर्दा त्यतिखेर हामीलार्इ धेरैले भनेका थिएँ – बिहे नगरेकै वर्ष दिनमा बच्चा हुँदैछ ? मानिसहरूले हाम्रो अनुपम खुशिको विषयलार्इ मजाकको विषयमा रूपान्तरित बनाएका थिए । मैले कति गाइँगुइ सुनेको थिएँ ‍- ‍"फलानाकी दुलही त पाउनी छे रे" "वर्षदिनमै कस्तो पाउनी बनेकी" "खै पढेलेखेका भएर पनि के गरेका हुन कुन्नी" सबै हाम्रै बिषयमा बनाइएका कुराहरू थिए । मजाक थिए ।
"हाम्रोमा मान्छेहरू किन अरूको विषयमा कुरा गर्नमा चाख लिन्छन् ?" मेरो टेबल नजिकै आफ्नो गर्भमा रहेको बच्चाका बिषयमा कुरा गरिरहेकी हन्नाले "आफूले छोरीको इच्छा राखेको तर छोरा भएको पुष्टी डाक्टरले गरिदियो" बताइरहदा म तन्द्राबाट ब्यूँतिन पुगेछु । उनी र म जन्मे हुर्केको संस्कार फरक छ । मान्छेका नीजि कुराहरूमा अर्को मान्छेको हस्तक्षेप हुँदैन यिनको नगरीमा, अरूको नीजि कुरामा हस्तक्षेप गर्न सके आफ्नो शान उँचो हुने विश्वास राख्छन् मान्छेहरू मेरो नगरीमा !
हन्नाले भनिन् ‍‑ मैले र मेरो श्रीमानले गर्भमा रहेको बच्चाको स्वास्थ्यको बिषयमा थुप्रै छलफल गर्दै आएका छौं । हामी खुशी छौ – बच्चाको स्वास्थ्य राम्रो छ । हामीलाई छोरी होस् भन्ने ठूलो चाहना थियो तर आज थाहा लाग्यो – यो गर्भमा रहेको शिशु छोरा रहिछ । तर यो त्यति चिन्ताको विषय पनि भएन् । जेहोस् यो चाँहि छोरी भैदिएको भए हामीसँग एउटा छोरा र अर्को छोरी हुन्थ्यो ।
मैले झल्याँस्स सम्झेँ- मान्छेले श्रीमतीको गर्भावस्थाका विषयमा गरेको लोकटिप्पणीलाई निमिट्यान्न पार्न मैले गर्भपतनको समेत सुझाव सुझाएको थिएँ । अहिले सम्झदा असह्य पिडा हुन्छ ‍- कस्तो सुझाब सुझाएको थिएँ मैले आखिर ? त्यो दिन उनी धेरैबेर सम्म रोएकी थिइन, मेरो सुझाव सुनेर ! उनलार्इ चिन्ता थियो सायद, अब उनको श्रीमानले खुशि लुट्दैछ । हामी त्यो रात एकअर्कासँग बोल्दा पनि बोलेनौं । र, उनले त्यो रात खाना समेत खाइनन् । एउटै कोल्टेमा त्यो रात बितेको थियो ।
हुन त हाम्रो समाजमा कतिपय नारीहरू अवाञ्छित गर्भ बोक्न पनि बाध्य छन् । कतिपयले छोरा जन्माउनकै लागि गर्भ बोकेका हुन्छन् । अब ती नारीहरूले कसरी फुर्सद मिलाउन सकुन थाहा पाउनलार्इ ‍- गर्भमा भएको बच्चाको स्वास्थ्यको विषयमा ! तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन - सुत्केरी हुन नसकेर मृत्यु हुने महिलाहरूको सूची लामै छ । धेरै फरक छ – जीवन जिउने तरिकामा ! यो नर्वे अनि त्यो नेपाल !
bhanij khusi lageyo yo lekh rakhekoma. hamro jasto sankochit ra ku sanskar le madariye ko desh bhanau wa kunai asichhit ra aggyanta le bhariyeko yauta yesto thalo ho. jaha hajar sir bhayeka nag raja le ta samjhauna nasake ko bhayera pani muni gayera afai lukera baseka hun bhanne sunincha katai katai bhane.aba bhanij le yeti sano lekh lekhera kole bujhne ra kole yesko bhabana bujhne.jaba ki aafnai shrimati le bacha pauda kheri ta usko logne lai thaha hudaina ra u afno kamma gayeko huncha. junbela u ghar farkancha ani matra thaha paucha ki u babu bhayo(chora wa chori) wa kasto bidambana bhanu ya badheyta?ke bhanne?malai bhanij ko kura nikai gadeyo keya bhanij .bidhya kasaam tesaile napuge ko thapna ra bhanij lai aru hausala dina manlagera yo sano kura haru thape ko hu hai.
bhanij maile pani dekheko chu yesto dherai thau ra gauma kati dukha kasta sahera hamra nepali cheli beti harule bacha paune niuma jiu jyan nai gumai rahe ka hunchan.chan pani aajaka din samma.tara maile kunai thauma yesto samma dekhe bhanij junbela afni shrimati ko petma bacha aako bhanne matra thaha huncha pahilo mahina dekhinai uslai afno shrimanle yeti syar susar garchaki bhanij kurai garda pani patteyar lagdaina jabaki usko petma bacha ko aakar pani baneko hudaina bas sewama lagirahanchan.teti matra kaha hora nuhaidine luga dhoidine ani rati uthera bhok lageyo bhanera shrimatile bhani bhane uthera gharma navaye ko kura khana manlagyo re bhanera motar liyera gayera khana wa kunai juce kinera khuwa ko pani thaha pako chu.ani prateyk mahina ma clinick(hospital)laneta sadharan kura bhai halyo antim mahina wa antim din ko kura ta jhan kasto hun cha thahacha bhanij lai?jaba bacha paune betha lagcha hospitama dubaijana lai room ba lagera rakhi dincha ani bacha niklana sakena bhane budile kanne budale bacha tanna lagaucha jabaki bachata dubaijana ko honi. tesaile jaba desh ko bikas huncha ani janatama pani chetana aucha.hunata desh bikas nabhayeni janatalebhujhna parni kura ta bhujnu parne ho tara khoi hamro desh ma ke mileko chaina kunni.ya bhujhera pani nabujhe ko jhai gari rako hoki jasto lagcha malaita.bhanij bidhya kasam.
त्यही त मामा सबै हामीले सोचे जस्तो नहुने ! अझ यो विषयमा हाम्रो गाउँ त असाध्यै खत्तम स्थितीबाट गुज्रिरहेको छ । कति यस्ता मान्छेहरू पनि छन् जसले कतिखेर कुन मान्छेलार्इ कसरी खुट्टा तानेर खसाल्ने हो, तल पार्ने हो भनेर ढुकेर बसिरहेका हुन्छन् ।